साउन एकदेखि ‘अवैध’ मोबाइल नचल्ने, मोबाइल उपहार पाउनेहरू त्रसित - टि. एल. एन पोस्ट
Home समाचार साउन एकदेखि ‘अवैध’ मोबाइल नचल्ने, मोबाइल उपहार पाउनेहरू त्रसित
साउन एकदेखि ‘अवैध’ मोबाइल नचल्ने, मोबाइल उपहार पाउनेहरू त्रसित
‘अवैध’ रूपमा नेपाल भित्रिएका मोबाइल साउन एक गतेदेखि नचल्ने भएका छन् । यस नियमका कारण विदेशबाट निजी प्रयोगका रूपमा वा उपहार पाएर मोबाइल भित्र्याउनेहरू त्रसित छन् । तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार राज्यलाई राजस्व छलेर नेपाल भित्रिने मोबाइल–सेटलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र यो व्यवस्था लगाइएकाले अरूले डराउनुपर्दैन ।
आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न र राज्यलाई राजस्वसमेत बढाउन यस्तो नियम कडाइका साथ लागू गर्न लागिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो । पौडेलका अनुसार विदेशबाट सीधै खरिद गरेर ल्याइएका मोबाइललाई प्राधिकरणको अनलाइनमा रजिस्टर गरेपछि मात्रै सञ्चालनमा आउनेछन् । हाल चलिरहेका मोबाइललाई यो नियम कडाइका साथ लागू नभए पनि साउन एक गतेपछि सञ्चालनमा आउने मोबाइलमा यो नियम कडाइका साथ लागू हुनेछ ।
नेपालमा खरिद गरिएका मोबाइलमा नेपाल भित्र्याउने कम्पनीले रजिस्टर गर्ने हुँदा त्यसको सबै जानकारी प्राधिकरणसँंग हुने र बाहिर–बाहिर ल्याइएका मोबाइलको कुनै जानकारी नहुँदा त्यस्ता मोबाइलबाट आपराधिक क्रियाकलापसमेत हुने गरेको र त्यसको नियन्त्रणका लागि मोबाइल रजिस्ट्री अनिवार्य गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । अहिलेसम्म चलेका मोबाइल दर्ताभन्दा पनि अब नयाँ भित्रिने मोबाइलमा केन्द्रित भएर काम गरेको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।
Previous articleआजको मौसम : आज कहाँ-कहाँ पर्छ पानी ?
Next articleधेरै थकाई लाग्ने ६ कारण
कक्षा १२ को उत्तरपुस्तिका पल्टाउदै गरेको टिकटक पुरै भाईरल बन्यो !
अहिले टिकटक सबैको लोकप्रिय बनेको छ । आफुमा भएको प्रतिभा देखि लिएर हास्यास्पद भिडियो हालेर धेरै भियुज तान्नेको होडबाजी नै चलेको छ । यस्तै...
डी मारियाको गोलले ब्राजिलविरूद्ध पहिलो हाफमा अर्जेन्टिनाको अग्रता
सिंगटी हाइड्रोको आइपीओ भर्ने आज अन्तिम दिन
​बलिउडकी चर्चित गायिका नेहा कक्कर गर्भवती